Ozi ngwa ngwa CDC maka ndị America gbara ọgwụ mgbochi: Booster Shot
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ozi ngwa ngwa CDC maka ndị America gbara ọgwụ mgbochi: Booster Shot
Akụkọ Ahụike • LGBTQ • News • Akwụkwọ akụkọ USA
Nde mmadụ iri na anọ nọ na United States natara ọgwụ mgbochi Johnson na Johnson chere na echefuru ya na azụ. Taa, nke a nwere ike gbanwee site na ndụmọdụ na -echere ka agbanyere agbamume maka ihe karịrị afọ 14 niile.
CDC, Ihe Ụlọ Ọrụ Maka Ọchịchị na Mgbochi Ọrịa na United States wepụtara ezigbo ntuziaka maka ndị America na ozi ngwa ngwa mgbe a ga -enweta mgbatị ahụ nke atọ izu atọ gara aga
Ọ dị mkpa ịghọta ọgwụ mgbochi mbụ na nke abụọ nke ọgwụ COVID-19 na-ebute ụzọ karịa ịgba ọgwụ ọ bụla
Taa otu ndị ọkachamara na mpụga na Fraịde dụrụ ndị nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ ka ha nye ikike inye ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson coronavirus maka ndị dị afọ 18 na karịa.
Ngalaba Ahụike na 50 US-States na-ekepụta ụdị nke ozi ndabere na nkwanye, na-eme ka okwu ahụ dị mgbagwoju anya na mgbe ụfọdụ na-agbagwoju anya.
Mgba ọgwụ mgbochi Pfizer na Moderna nke COVID-19 gbara abụọ na-enye nchebe dị mma megide mgbaàmà siri ike, ụlọ ọgwụ, na ọnwụ. Usoro ọgwụ mgbochi mbụ na nke abụọ kwesịrị ibute ụzọ karịa ihe ọ bụla nwere ike ịkwalite ya. Ụzọ kacha mma ịchekwa ezinụlọ na obodo bụ ịhụ na ndị bi na -enweghị ọgwụ mgbochi ọrịa mezuru usoro ịgba ọgwụ mgbochi mbụ ha.
A na-atụ aro ịgba Pfizer ume ugbu a maka ndị otu dị mkpa ka ha bulie nzaghachi mgbochi ọrịa ha na COVID-19 yana inye nchebe megide ọrịa, gụnyere ụdị Delta.
Gịnị mere ị ga -eji tụlee ihe na -ewuli elu?
Ọgwụ mgbochi COVID-19 ka bụ ngwaọrụ kachasị dị irè iji gbochie ọrịa siri ike, ụlọ ọgwụ, na ọnwụ, gụnyere nchebe megide ụdị Delta na-ekesa.
Agbanyeghị, ọmụmụ nyocha nke erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) na-egosi na mgbe agbachara ọgwụ mgbochi zuru oke, nchebe megide nje na-ebute COVID-19 na-ebelata ka oge na-aga ma na-enye obere nchebe megide ụdị Delta.
Shouldnye kwesịrị inweta agbam ume?
Ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu maka ibute ọrịa ma ọ bụ ọrịa siri ike sitere na COVID-19 n'ihi afọ ha, ọnọdụ ahụike dị ala, ma ọ bụ n'ihi na ha bi ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ndị nọ ha nso nke na-etinye ha n'ihe egwu dị ukwuu maka ikpughe ma ọ bụ mbufe.
CDC kwusiri ike na a ga -enye ndị okenye dị afọ 65 ma ọ bụ karịa na ndị dị afọ 50 ruo 64 nwere ọnọdụ ahụike dị ala n'ihi na mgbochi mgbochi n'ime otu ndị a na -etinye ha n'ihe egwu kachasị maka ọrịa siri ike. Ya mere, Ngalaba Ahụike n'ọtụtụ steeti tụrụ aro ka ndị na -ahụ maka ahụike bute otu ndị a ụzọ.
Dị ka inye ndị na -akwalite ume na -enye ohere, CDC ga -atụ aro maka otu ndị ọzọ, gụnyere ndị okenye afọ 18 ruo 49 nwere ọnọdụ ahụike dị n'okpuru dabere na uru na ihe egwu dịịrị onye ọ bụla, yana ndị okenye 18 ruo 64 ndị nọ n'ihe egwu dị elu maka ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. ikpughe, dabere na uru na ihe egwu dịịrị onye ọ bụla.
Dịka ndị bi ebe ahụ ji ndidi chere oge nke ha mgbe emere ọgwụ mgbochi COVID-19, anyị niile kwesịrị igosipụta aloha ma gbaa mbọ hụ na ndị otu ebuputara mkpa ga -ebu ụzọ nweta nkwalite ha, bụ akụkụ nke ntuzi aka enyere ndị bi na steeti Hawaii.
Ihe nkwalite Pfizer bụ naanị maka ndị natara ọgwụ mgbochi Pfizer; akwadoghị ya maka ndị natara ọgwụ Moderna ma ọ bụ Johnson & Johnson.
A na -enyocha ọgwụ ọgwụ Moderna na Johnson & Johnson maka ọgwụ nkwalite nke ha yana ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọ bụla n'ime ọgwụ ndị a kwesịrị ichere ruo mgbe FDA na CDC nyere ndụmọdụ ha. Agba nke mbụ nke ndụmọdụ a emechaala ma na -eche ọkwa ọkwa.
Kedu mgbe ị ga -enweta booster?
Oge akwadoro maka nkwalite Pfizer bụ ọnwa isii ka ị mechara nseta abụọ mbụ gị. Ozi sitere na nnwale ụlọ ọgwụ gosiri na ogbugba Pfizer-BioNTech, nke nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ kwadoro, na-egosi na mmeghachi omume mgbochi na-arịwanye elu n'etiti ndị sonyere ikpe ahụ nke mechara usoro ịgba ọgwụ mgbochi Pfizer abụọ gbara ọnwa isii. na mbụ.
OVID-19 Nkwalite ọgwụ mgbochi dị maka ndị na-enweta ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech ndị dechara usoro izizi ha opekata mpe ọnwa isii gara aga ma bụrụ:
Afọ 18+ na -arụ ọrụ ntọala dị oke egwu
Afọ 18+ ndị bi na ya ntọala dị oke egwu